Tsy te-hahalala anefa ny mpihaza sy ny mpihinana fa dia am-bilany sy am-bilia ary an-tsotro avokoa izay azo.
Ho tapitra ringana vetivety, noho izany, ny karazan-trondro raha tsy misy fiatoana kely ny fotoam-pihazana isan-taona.
Velon-taraina ireo mpivelona amin’ny sehatra ny lalam-pihariana jono aty Alaotra eo anatrehan’ny fepetra izay efa mahazatra isan-taona.
Mangataka ny fanafohezana ho iray volana ny fotoana fandraràna ny jono izy ireo. Mahatsiaro ho voa mafy toy ny olon-drehetra noho ny fepetra ara-pahasalamana izy ireo, koa ny jono no heveriny fa fomba hahitam-bola haingana amin’izao.
Nanamafy anefa ny tompon'andraikitry ny minisitera fa tokony ho efa-bolana ny fotoana fanakatonana ny jono, raha ny fepetra ara-teknika no jerena.
Tsetratsetra tsy aritra kely, indray taona dia nisy raim-pianakaviana voatana am-ponja taty Ambatondrazaka satria tratra nanjono nandritra ny fotoana voarara. Mbola trondro ihany koa anefa ny laoka miaraka amin’ny vary naterim-badiny ho azy.